श्वेता भन्छिन्: ‘मेरो कथा न कसैले पर्दामा हेर्न सक्छ, न कसैले पढ्न नै सक्छ’ (भिडियोसहित)
May 13, 2020 1920
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक स’फल अभिनेत्री श्वेता खड्का । खड्काले अहिले व्यापार र सिनेमासँगै बिभिन्न सामाजिक अभिनयान तथा सामाजिक सेवामा पनि कदम बढाएकी छिन् । श्वेता खड्का अहिले धेरैको लागि रोल मोडल बनेकी छिन् । तर उनको जीवन’को यहाँसम्मको यात्रा त्यति सहज थिएन ।
पनौतीमा जन्मेर अहिले श्वेता खड्का’का नामले स्थापित हुँदासम्म जीवनमा घटेका विविध घट’ना र रहस्यहरु उनले बाँडेकी छिन् । श्वेताको जन्म काभ्रे जिल्लाको पनौती नगर पालिका वडा नम्बर १२ मा भएको हो । त्यहि मेरो बाल्यकाल ‘एकदमै रमाइलोसँग बित्यो । अहिले पनि मलाई मेरो बाल्यकाल फेरि फिर्ता आए’ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
बाल्यकालमा मेरा धेरै साथीहरु थिए । कहिलेकाही म उनी’हरुको लिडर जस्तै हुन्थेँ भने कहिले निकै लजाउथेँ । मला’ई जतिले पनि भेट्नुहुन्थ्यो सबैलै एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । मेरो प’ढाइ भने सामान्य थियो । शिक्षकहरुले सधैँ मलाई पढ्न प्रे’रित गर्नुहुन्थ्यो । जब म किशोरावस्थामा प्रबेश गरे एकदमै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको थिएँ ।
लजालु भएका कारण अ’रुको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने मेरो कान रातो हुन्थ्यो । म एकदमै डराउँथे । बाटोमा हिंड्दा कसैले जिस्कायो भने साथीहरु बोल्ने गर्थे । तर म बोल्न पनि स’क्दिनथेँ । चुप लागेर आफ्नो बाटो हिड्थेँ । त्यस्तो स्वभाव थियो मेरो किशोरावस्थामा । ब्याचलर पढ्दा त सबै केटीहरु सकिन्थे ।
‘सानो घर, हाम्रो रहर’ को सपना साँ’चेका मेरा प्रिय माझी बस्तीका दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुसँग हात्तेमालो गर्दै यहाँसम्म आइपुगियो । माझि बस्ती निर्माण गरेप’छि उनले त्यसको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर एउटा स्टाट’स लेखिन् धेरै क ष्ट सहियो, धेरै ह ण्डर खाइयो । कतिले गा ली गरे अनि कतिले आँखा तरे ।
कोहीले आश देखाए भने कोही”ले उपहास गरे । तर सहयोगीहरुको साथ र माझी बस्तीका युवाहरुको हातका कारण हामी, हाम्रो सपनालाई बिपनामा परिणत गर्ने तर्खरमा’ छौ । अझै केही काम बाँकी छन् । म एक्लैले, अपुरो कामलाई पूरा गर्न सम्भव छैन । आउनुस् अझै मौका छ । नमुना माझी बस्तीमा आ–आफ्नो योगदा’न गरौ ।’ यो सँगै अहिले सामा”जिक सञ्जालमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
चर्चित गीतकार, साहित्यकार तथा पूर्वजर्नेल राजेन्द्र थापा समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्न मा’हिर मानिन्छन् । उहाँका लेख र मुक्त चोटिला हुन्छन् । आफूलाई लागेको कुरा उहाँ तर्कसंगत पुष्टि गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँका व्यंग्य पनि यति सशक्त छन् कि जसका बारेमा लेखिएको हो ऊ मर्माहत हुन पुग्छ । चोटिला टिप्पणी लेख्न माहिर थापाले शनिबार फेसबुकमा एउटा समाचारको विषयमा टिप्प’णी लेख्नुभयो जुन टिप्पणी नायिका श्वेता खड्का’प्रति थियो ।
तर, त्यसको प्र हा र भने सिधै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनतर्फ लक्षित छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘लौ सिस्टम बिगारेको किन श्वेता खड्काले रु न चन्दा मागेको था भो । न जस्ता, ढुंगा बो’केको तस्बिर ! न मिडियामा दयालु मनको प्रदर्शन गरी हुँक्क ! न प्रचण्डको छोरीको इलाकामा निर्माण गरेको ! न अखबार न अनला’इन न फेसबुक ।
उता त बस्ती नै बसिसकेको रहेछ । यो हो गरिब पी डित भुइँमान्छेको भलाइ ! हिन्दु ग्रन्थहरु र कुरानमा समेत दान दिएको गोप्य राख्नु धर्म हो, हल्ला गर्नु ढोंग हो भनेको छ ।
सिक सिक देवदेवी धु सु लगायतका सेलेब्रेटीहरु । सलाम छ श्वेतालाई ।’ सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको सुन्तली फाउन्डेसनले पनि यसबीचमा चारवटा नमुना बस्ती बसा’यो । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डे’सनले गरेका हरेक गतिविधि समाचार बने, बनाइए । -(नेेपाल भाइरल न्युज)
Prevनेता भीम रावलकाे सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रका एक जवानमा कोरोना पुष्टि
Nextनेपालमा थप २४ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २४३ पुग्यो
आज जेठ १८ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134637)